Maxkamadda Maxkamadda Darjada 1aad ee Ciidamada Qalabka sida oo Xukuno riday – Radio Baidoa
Maxkamadda Maxkamadda Darjada 1aad ee Ciidamada Qalabka sida oo Xukuno riday
Maxkamadda Darjada 1aad ee Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa Maanta oo Talaado ah waxaa ay xukuno kala duwan ku riday Ragg lagu eedeeyey inay ka tirsanaayeen Ururka Al-Shabaab.
Cabbduqaadir Suufi Muunye & Saciid Cumar Cabbdullaahi ayaa loo heystaa kamid ahaanshiyaha Alshabaab iyo in ay ahaayeen u qaabilsanayaaal xagga maamulka iyo maaliyadda uga wakiil ah maleeshiyada Al-Shabaab Tuulada Mareerey oo hoos tagta degmada Afgooye ee gobalka Shabeellada Hoose.
Eedeysanaha koowaad ayaa ahaa Taliyihii tuullada halka eedeysanaha labaad uu ahaa u qaabilsanaha xagga Uruurinta lacagta ay ay ka qaadaan dadka deegaanka.
Cabduqaadir iyo Saciid ayaa ka sheegay fadhiga Maxkamadda in ay labadooda hoos tegi jireen Dakhare oo isna maqane ah.
Ibraahim Aadan Dakhare ayaa ah taliyaha tobanka tuullo ee kala ah Yunbis, Buulle-kulan, Bangaleey, Baladul-Amiin, Moor-diinle, Sabiid, Mareerey, Gaalle-wer, Cumar-beerre iyo Sagaalaad, waxa ayna labada xukunsane ahaayeen kuwa ku xigeen iyo wakiil uga ah Tuullada Mareerey.
Maxkamadda ayaa wada tashi dheer kadib go’aan ka soo saartay labada shaqsi ee kala ah Cabbduqaadir Suufi Muunye & Saciid Cumar Cabbdullaahi waxa ayna ku wada xukuntay min 10-sano oo xabsi ciidan, sida uu u sheegay dhinacyada dacwadda Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamaa Qalabka sida.
Xasan waxaa loo heystaa kamid ahaanshiyaha Al-Shabaab iyo in uu si gaar ah ugu ahaa wakiil wareed mid kamid ah warbaahinta ku hadasho Afka Alshabaab.
Xafiiska ayaa sidoo kale la wadaagay garsoorayaasha Maxkamadda fariimo maqal iyo qoraal isugu jiro taasi oo muujineysa howshiisa wardoonimo oo uu shirkada kula ahaa Al-Shabaab,sida lagu sheegay War kasoo baxay Xafiiska Maxkamadda Ciidamada.
Mareykanka Oo Fuliyey Duqeyn Cusub
Muuse Biixi”Farmaajo ma imaan karo Hargayso waxaana ka xigaa Gabaygii Faarax Nuur”